Kedu otu Mmetụta Na-esi Na Nzuzo Na-enwe Mmetụta Dị Ukwuu Na Akpụkpọ Gị - Nkọwa Ahụike
Home » blog » Kedu otu Mmetụta Na-esi Na Nzuzo Na-enwe Mmetụta Dị Ukwuu Na Ahụ Gị
Isi ihe oyiyi: Pexels.com
Kwa ụbọchị, ndị mmadụ na-ekpuchi nsị dị na ikuku, nri, na mmiri ha na-aṅụ, na-echefu ihe ndị mmadụ na-eji na akpụkpọ anụ kwa ụbọchị. Ndị toxins ndị a na-agụnye pesticides, chemical plastics, na ihe mgbaze. Ọ bụ ezie na ịnwere ike ị gbalịsie ike iji dozie ihe ndị a, ọ naghị ekwe omume izere ha niile.
A na-ahụ ahụ gị nke ọma ma nwee akụkụ nke na-arụ ọrụ ehihie na abalị iji dozie ma kpochapụ ihe ọ bụla nwere ike ịdị na ya. Akpụkpọ ahụ bụ akụkụ kachasị mkpa ma bụrụ ihe kasị mma iji dozie ahụ. Ọ na-echebe ahụ pụọ na nsogbu ọ bụla ma mee ka ihe ndị ahụ dị njikere maka excretion. Rịba ama na akpụkpọ ahụ bụ otu n'ime akụkụ mbụ iji gosipụta mmetụta nke toxins na-abawanye n'ahụ. Nke a bụ ụfọdụ n'ime uru ndị akpụkpọ ahụ gị ga-enwe n'ahụ gị.
Oge ọ bụla ị na-afụ ọkụ, ahụ gị na-ewepụta 10% nke niile toxins na ahụ gị. Ya mere, ọbụna n'oge gị holistic detox ọcha, i kwesiri ijide n'aka na ị na-arụ ọrụ ka ahụ gị nwee ike ịhapụ ngwa ngwa ngwa ngwa. Ya mere, akpụkpọ ahụ gị, ga - enyere ahụ gị aka ka ọ daa. A na-eme ka ose cayenne dị ọcha maka ịme ka ị ṅụọ karịa ihe ndị ọzọ na-eme.
Mgbe ị na-ahọrọ atụmatụ ndọtị, jide n'aka na ọ na-enyekwa aka ikpochapụ nsị ọ bụla nke dị n'okpuru anụ. Ndị toxins ndị a na-agụnyekwa ngwaahịa mara mma nke na-akpata breakouts. Ị ga-enwe obi ụtọ, na-egbukepụ akpụkpọ ahụ mgbe usoro mmebi ahụ gasịrị n'ihi na ahụ gị ga-adị ọcha na ahụike.
Usoro Ejighị Ọdịdị Mma
Enweghị ọtụtụ toxins na ahụ gị, usoro ntinye aka gị nwere ike inye nchebe dị gị mkpa. Akpụkpọ ahụ na-enweta ihe kachasị njọ site na ọrụ kwa ụbọchị. Dịka ọmụmaatụ, enwere oge mgbe ị ga-emerụ ụkwụ gị na mberede ma ọ bụ belata onwe gị mgbe ị na-esi nri. Mmetụta ndị dị otú ahụ nwere ike ịdị ize ndụ, n'agbanyeghị na ha dị ntakịrị, ọ bụrụ na ọrịa ahụ gị dị ala.
Ọrịa na akpụkpọ ahụ na-adịkarị mfe nje bacteria n'ihi na a na-ahụ ihe a. Ya mere, atụmatụ dị njọ na-akwado usoro ntinye aka gị ka mmebi dị otú ahụ ghara ịdị oke ike ịgwọ ọbụna na enyemaka nke dọkịta. Na mgbakwunye na atụmatụ mmechi ahụ, ọ dị mkpa ka ị gbanwee ndụ gị kpamkpam ma jide n'aka na ị na-etinye aka na mgbatị dị elu nke ga-enyere aka igbochi ọrịa ndị ị ga-abanye n'ahụ gị. Akpụkpọ ahụ na-egosi ihe ịrịba ama mbụ nke ọrịa. Nke a pụtara na ị ga-egbochi ọrịa ka ịghara ịbanye n'akụkụ ọ bụla nke ahụ gị n'agbanyeghị akwụ ụgwọ. Beyonce bụ ezigbo ihe atụ nke uru bara uru nke ahu zuru oke.
Ọgba Ogo Ogologo
Ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ na-eche na ibubiga oke ókè na-emetụta akụkụ ahụ gị. Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ ụzọ nke ibu oke na-emetụta akpụkpọ ahụ gị. Maka otu, mgbe ahụ gị na-eburu ibu arọ, ọ na-eme ka insulin na-eguzogide ọgwụ. Mgbe nke a mere, akpụkpọ ahụ gị malitere ịmepụta ihe ndị na-acha odo odo nke a maara dịka ndị nigrican acanthosis. Ndị a na-emekarị ebe enwere akpụkpọ anụ ma ọ bụ ebe ọ na-agafe. Ọganihu nke na-eme ka ahụ gị dum nwee ọnyà, nke na-aghọ nje bacteria. Ebe ndị a nwere ike ịmalite ịmalite, na-eme ka ị na-ebute ọrịa nsị.
Oké ibu oke eme ka o nwekwuo ohere ịmepụta ihe, nke na-adịghị atọ ọchị. Ha nwere ike igwu onwe gi n'adighi nma. Enwere ike igbochi ọnọdụ ndị a ma ọ bụrụ na ị na-enwe ezigbo ahụ ike. Ahụ zuru oke dị ọcha na-enyere gị aka ịkwụsị ngwa ngwa ngwa ngwa. Ịkwesiri ijide n'aka na ị na-eburu ibu ahụ ka ọ bụrụ mgbe niile nwere ezigbo akpụkpọ.
Na-egbu oge ịmalite ịka nká
Ịka nká bụ ihe a na-apụghị igbochi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere ike ịmụta ihe ọ bụla site na Hollywood bụ na e nwere ihe dị otú a dịka ịka nká. Tupu ị nụ ka ọkpụkpụ gị na-awa mgbe ị na-eguzo, ị ga-ahụ ịka nká na akpụkpọ gị. Ọ ga-amalite ịdị na-agbanwe, na-agagharị, na ọbụna na-amalite thinning. Akpụkpọ ahụ gị na-aghọ nke na-emebi emebi ka afọ na-agafe. Idocha ọla dị arọ na ọgwụ ndị na-enweghị onwe gị site na akpụkpọ gị na-eme ka ọ ghara ịka nká. N'ikpeazụ, ọ ga-adị nwayọ na nke dị nro.
Ọ bụkwa ụzọ dị mma isi nọgide na-esi na-emepe emepe. Site na nke a ma sachaa na ịhịa aka n'ịhịa ahụ ọma, ị ga-eme ka anụ ahụ gị dị jụụ ma mezie mgbasa. Ericka Baldwin nwere ihe dị irè egbu oge ịka nká na-eji zuru ahụ detox.
Na-ewepụ nke ọjọọ Odor
Ọnụ gị abụghị akụkụ nke ahụ na-emepụta ísì si nri ị na-eri. Ahụ gị na-esi ísì ụtọ ka ọ dị ka ihe ị tinyere n'ime ahụ gị. Dịka ọmụmaatụ, ị ga-achọpụta na ndị na-aṅụbiga mmanya ókè na obere mmiri na-enwekarị ọsụsọ jọgburu onwe ha. Ndị ọ bụla na-aṅụ mmiri mmiri dị ukwuu ma ọ bụrụ na esi ísì ísì. Ọ bụrụ na -eme ka ị rie nri na-adịghị mma, enwere ike ịnweta ya naanị ka ọ na-esi ísì gị. Mgbatị na-enyere aka ịkwụsị ihe ọjọọ ndị ahụ dị egwu ma hapụ akpụkpọ ahụ gị na-achọ ma na-esi ísì ọhụrụ.
Ihe kacha mkpa mere ị ga - eji kwụpụ bụ iji hụ na ndụ gị ka mma. Usoro nkwụsị na-eme ka ị nwee mmetụta dị ukwuu banyere onwe gị ma mee ka ụzọ ị na-ele ma ọ bụ na-enweghị etememe dịkwuo mma. Ị ga-enwekwu ike na ụbọchị gị dum.